Four-wheel drive - ongakhetha kunokwenzeka
Ushayela imoto, ukuba ne drive edonsa ngawo wonke amasondo, kudala inkohliso omnipotence kanye nokwenzeka enqoba iyiphi sezwe. Nokho, kufanele ungazikhohlisi, kungcono nje kohliso. Futhi ngokuvamile kusekelwe izakhiwo ngokuphelele zamanga. Uma umdayisi esitolo wathi ukukunikeza imoto - SUV futhi uyakwazi ukuhamba nomaphi lapho ufuna, kuba, ukubeka kahle, kancane iqiniso.
Namuhla, umshini isebenzisa ezine eziyisisekelo ezidonsa uhlelo. Omunye wabo uhlobo drive Ingxenye Isikhathi, okungase elihunyushwe ngokuthi "elifushane kwakuhlanganisa". Lapho sihamba ngemoto emgwaqweni enamathela okuqinile imoto esiku ezingemuva-wheel drive izimoto, futhi kuphela uma kudingeka, kwi ezishelelayo, umgwaqo ezimanzi, isikhathi esifushane kungenziwa exhunywe kwi-front oluvala amasondo. imodi okunjalo ushayela ukudluliswa ezinjalo kumele ibe mifisha. Kungenjalo nakanjani kulimaze.
Enye ikuvumela ukuba kusebenze ezine-wheel drive imoto, ngokuthi Kuyadingeka, okungase elihunyushwe ngokuthi "okufunekayo". Eqinisweni, i-okuzenzakalelayo Ingxenye Isikhathi. Lapho endleleni evamile endaweni eqinile, imoto ne drive okunjalo kuyoba umshini evamile nge enophephela lamasondo angemuva. Kodwa lapho amasondo uqale spin, uxhuma ngokuzenzakalelayo phambi oluvala amasondo. Kukhona ongakhetha uma imoto kukuyo-wheel drive, futhi ngaphezu kwalokho ngokuzenzakalelayo uxhuma ezingemuva-wheel drive.
Nokho, lokhu akulishintshi okuhilelekile. indlela enjalo ubhekwa ezinhle iqhwa. Ububi uhlelo sinjalo ukungabikho umehluko phakathi ama-ekseli amasondo. Lapho sihamba ngemoto emgwaqweni edolobheni ukudluliswa enjalo ingase iqale akwamukeleki lokhu, kodwa ukuziyeka emigwaqweni kuyinto engathandeki kakhulu.
Enye wonke-wheel drive uhlelo okuthiwa Esigcwele ( "exhunywe unomphela"). Nale ndlela, exhunywe phambi futhi unomphela enama-asi misa, kodwa zazingakabi izinkinga ezihambisana nokusakaza kwamandla kusuka injini phakathi ama-ekseli amasondo. Nakuba imoto ikhona isikhungo umehluko, kodwa ngenxa ukuntula kwayo ekuvimbeni ukudluliswa enjalo kungaba kubhekwe efanelekayo izimo komuzi, hhayi off-road izimo.
Lokhu idrayivu edonsa ngawo wonke amasondo - ke kuyafana Full Time, njalo ivuliwe, kodwa nokuba ezengeziwe ukukhiya isikhungo umehluko. Kulokhu, lapho slippage kwesondo ne-torque umnyuziki ngeke asuke e amasondo ilele, kodwa ngenxa Ukuvinjwa izokwabiwa phakathi akha ama-ekseli amasondo phambi. Nale moto kungenziwa ngokuphumelelayo okunqoba izithiyo endleleni.
Lokhu okungenhla uchaza izinhlobo zakudala wonke-wheel drive. Manje, ezimweni eziningi, kusetshenziswe electronics emzamweni bona kungenzeka ukunyakaza emigwaqeni nge Ukuhlanganisa abampofu noma cha. Ngenxa yale njongo, izindlela ezahlukene ukuze bayothola braking amasondo, contraption amandla ukusatshalaliswa kusukela motor isondo ngayinye, ukulawula ngamunye wesondo. Le ndlela kungenzeka, futhi kunengqondo, kodwa ngaphandle kwalokho, kukhona izindleko. Futhi imoto, ukuba ne value ehloniphekile njengoba kungamukelwa ukushayela ngokukhululekile marsh noma endleleni, etholakalayo abakhasi tractor.
Yebo, futhi yimuphi omunye ongakhetha zibandakanya okubhekiswe ukusetshenziswa kwamadivaysi wonke-wheel drive amakhono. Kuleso simo, uma imoto yakhelwe ukuhamba emzini, akazange kudingeka ezine-wheel drive nazo zonke sivala. Nabo futhi ukusetshenziswa uphethiloli lingaphezulu futhi izindleko imoto ngenhla. Ngakho-ke, kubalulekile lapho uthenga imoto ukucacisa izimo oyobangela ingxenye enkulu ukuhamba kwakhe.
Ungakhethi emotweni edonsa ngawo wonke amasondo drive, uma kwenzeka nje. Umphumela anda petrol, isivinini sinciphise umonakalo omkhulu yesondlo. Ekhona ongakhetha powertrain ake uthola ithuba efaneleka kakhulu yokwenza ezimweni yokusebenza uqobo.
Peugeot Boxer - umsizi enkulu amabhizinisi amancane
Izinhlobo nemizwa nemizwelo
Utamatisi, zifakwe emanzini anosawoti ubusika - elula, esiphundu futhi amahle
Umnyango wezeMpilo esifundeni saseBryansk: ikheli, ucingo